Ukusetshenziswa kwe-PP lukathayela webhodi lepulasitiki?
Ibhodi lepulasitiki le-PP alinamanzi futhi likhanya. Isakhiwo esingenamanzi asephuki kalula njengamakhadibhodi wendabuko, futhi siyamelana nokugqwala, ukugqwala nokugoqa, futhi singasetshenziswa futhi. Kusukela ngo-2008, i-Huiyuan Plastic Hollow Board iye yaqhubeka yathuthukisa futhi yathuthukisa amandla ayo ...
Lingasetshenziswa isikhathi esingakanani ibhokisi elingenalutho lokungeniswa kwebhodi?
Abakhiqizi Bebhodi Elingenalutho Impilo yebhokisi lokuthengiswa kwebhodi le-anti-static elingenalutho ayihlobene kuphela nekhwalithi yomkhiqizo, kepha futhi ihlobene nendlela yokusebenzisa. Ukuze wandise impilo yesevisi futhi wehlise izindleko zokuyisebenzisa, yini okufanele yenziwe? Ukuvimbela ugesi we-static, ishidi elingenalutho ...
Ibhokisi lokungeniswa kwebhodi elingenalutho: Yiziphi izinzuzo zebhokisi elingenalutho lokungeniswa kwebhodi ekusetshenzisweni?
Ibhokisi elingenalutho lokungeniswa kwebhodi Ibhodi elingenalutho linezinzuzo eziningi njengohlobo olusha lwebhodi elisebenziseka kalula, nebhokisi lokungenisa ibhodi elingenalutho elenziwe ngokukhiqizwa kwesibili nokucutshungulwa kwebhodi elingenalutho nakho kuzuza le nzuzo okulula ukuyisebenzisa futhi kancane kancane ithatha indawo yendabuko ibhokisi Ekusebenziseni ...